ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ က
၂၀၁၉ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ
ⓘ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်သည့် ဝန်ကြီးဌာန ဖြစ်သည်။ သမ္မတဦးထင်ကျော် အစိုးရလက်ထက်တွင် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ..
ကျော်မြင့် အမည်ရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်များမှာ - ကျော်မြင့်လေး - အာရှလူငယ်အစည်းအရုံးဝင် မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟွားဟူ - နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ကျော်မြင့် တရားသူကြီး - အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံမှု အထူးခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌ မြန်စာဂုဏ်ကျော်မြင့် - စာရေးဆရာ ကျော်မြင့် ဆရာဝန်၊ ဝန်ကြီး - ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဟောင်း ကျော်မြင့်ထွန်း ဘောလုံးသမား
၂ဝ၁၉ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် U-17 ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကိုစက်တင်ဘာရက်ညနေနာရီအချိန်တွင် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိအားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်၊ မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးလှိုင်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇော်လင်းထွဋ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျန်းမာရေး နှင့်အားကစားဝန် ကြီးဌာန ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြသန်းထိုက်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီး ဌာနမှ ဒ ...
COVID-19 စစ်ဆေးခြင်း သည် SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ရှာသော နည်းလမ်းများ, isothermal nucleic acid amplification, မျိုးရိုးဗီဇ အစိတ်အပိုင်းရှာဖွေရခြင်းနည်းပညာ) နှင့် ရောဂါကူးစက်မှုကို တုံ့ပြန်သော ထုတ်လုပ်သည့် အန်တီဘော်ဒီများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသော ရောဂါများကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ အန်တီဘော်ဒီများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း ကို ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် လူဦးရေများကိုစမ်းသပ် စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အန်တီဘော်ဒီစစ်ဆေးမှုများအရ ရောဂါလက္ခဏာ ဘယ်လောက်များများရှိသလဲ၊ အသေးအဖွဲရောဂါလက္ခဏာများ အပါအဝင်သို့မဟုတ် ရောဂါလက္ခာမပြူသများ အပါဝင်ဖြစသည်။ တိကျသော သေဆုံးမှုနှုန ...
အခန်း အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် က ဤဥပဒေကို စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ခ ဤဥပဒေအခန်း ၁၈ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ဤဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ပြီး တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီး သည့်နေ့ရက်မှ စတင်အာဏာတည်စေရမည်။ ကျန်အခန်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ဤဥပဒေကို ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်တွင် စတင်အာဏာတည်စေရမည်။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရမည်- က စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူ၏ အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် စားသုံးသူနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့အကြား ကော်မရှင်နှင့် က ...
ကန်ဒကဒုကုသရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာ သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ အနောက်မြောက်ပိုင်းစီရင်စု၊ Polonnaruwa ခရိုင်၊ ဝေလီကန်ဒမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ကန်ဒကဒုမူးယစ်ဆေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာဟုလည်း သိကြသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် တရားမျှတမှုဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအရာရှိချုပ်က ထိန်းချုပ်လျှက်ရှိသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် စင်တာ၌ ဆေးစွဲနေသူများနှင့် ကိုဗစ် ၁၉ လူနာများကို စီနာပူရပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာနှင့်အတူ ကုသမှုများ ပေးလျက်ရှိသည်။ စင်တာသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မူးယစ်ဆေးဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ ဆေးစွဲနေသူများကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာ ...
ⓘ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန
ဖဆပလအစိုးရ ၁၉၄၈ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်မှ ၁၉၅၈ စက်တင်ဘာလထိ
တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရ ၁၉၆၂ မတ် ၂ ရက်မှ ၁၉၇၄ မတ် ၁ ရက်ထိ
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရ ၁၉၇၄ မတ် ၂ ရက်မှ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်ထိ
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်မှ ၁၉၉၇ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်ထိ
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ၁၉၉၇ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ ၂၀၁၁ မတ် ၃၀ ရက်ထိ
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ၂၀၁၁ မတ် ၃၁ မှ ၂၀၁၆ မတ် ၃၀ ထိ
1.1. ဝန်ကြီးများ တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရ ၁၉၆၂ မတ် ၂ ရက်မှ ၁၉၇၄ မတ် ၁ ရက်ထိ
1.2. ဝန်ကြီးများ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရ ၁၉၇၄ မတ် ၂ ရက်မှ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်ထိ
1.3. ဝန်ကြီးများ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်မှ ၁၉၉၇ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်ထိ
1.4. ဝန်ကြီးများ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ၁၉၉၇ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ ၂၀၁၁ မတ် ၃၀ ရက်ထိ
1.5. ဝန်ကြီးများ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ၂၀၁၁ မတ် ၃၁ မှ ၂၀၁၆ မတ် ၃၀ ထိ
1.6. ဝန်ကြီးများ ဦးထင်ကျော်/ဦးဝင်းမြင့် အစိုးရ ၂၀၁၆ မတ် ၃၁ မှ -
ကုသရေးဦးစီးဌာန ယခင် ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ယခင် ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန
ကီလီနော့ချီအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံ သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကီလီနော့ချီမြို့တွင် တည်ရှိသည့် အစိုးရဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကီလီနော့ချီခရိုင်၌ အရေးပါသည့် ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြောက်ပိုင်းစီရင်စုနယ်အစိုးရ၏ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ခုတင် ၁၁၀ ရှိသည်။ ဤဆေးရုံကို တစ်ခါတရံ "ကီလီနော့ချီခရိုင်အထွေထွရောဂါကုဆေးရုံ" ဟု ခေါ်ကြသည်။
Wikipedia: ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန
၂၀၁၉ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အသက် ၁၇ နှစ်အ ..
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ၂၀၁၉ စမ်းသပ် ..
ကန်ဒကဒုကုသရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစ ..